သံလွင်: မြမြရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းအား လုံးဝပြင်ဆင်ဖြတ်တောက်ခြင်းမပြုဘဲ တရားဝင် ရိုက်ကူးခွင့်ရပြီ
" မြမြ"ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာ မြမြအဖြစ်သရုပ်ဆောင်သင်ဇာဝင့်ကျော်က သရုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီး မုဒိမ်းမှုတရားခံသရုပ်ဆောင်ရွေးချယ်ပွဲမှ ရွေးချယ်ခြင်း ခံရတဲ့ သရုပ်ဆောင်သုံးဦးမှာ_အမှတ်စဉ်.... ၇. လင်းနေ၊ အမှတ်စဉ် ၈၀ . ကိုစိုင်း၊ ၁၂၈. မျိုးလှိုင်ဝင်း တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ "မြမြ" ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို ဒါရိုက်တာ ညိုမင်းလွင် မှ ရိုက်ကူးသွားမှာ ဖြစ်ပြီး "မြမြ" ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဟာဆိုရင် ပြီးခဲ့တဲ့ သင်္ကြန်ကာလအတွင်းမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ တောင်ဒဂုံမြို့နယ် က မြမြဆိုတဲ့ မိန်းကလေး မုဒိန်းကျင့် သတ်ဖြတ်ခံရတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာကို အခြေခံပြီး ရိုက်ကူးပုံဖော်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
#မြမြ #MyaMya #NyoMinLwin #MyanmarDirector #ThinzarWintKyaw
#Myanmar_Online_News #MyoHlaingWin #LinnNay
at 9/09/2019 03:16:00 PM